आर्थिक रूपमा खस्कियो त देश ! – TajaNepal
Home /Blog/आर्थिक रूपमा खस्कियो त देश !
कहाँ गए वामपन्थी अर्थशास्त्रीहरू ?
काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगमा हुनुपर्ने तथ्याङ्कशास्त्रीलाई एकाएक अर्थमन्त्री बनाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका योजनाहरू बकमफुसे हुने त होइनन् ? अहिले देखिएको सेयर बजारको अवस्थाले शङ्का उब्जाएको छ । नेपालको सेयर बजारमा २० लाख सदस्य छन् । तीमध्येबाट १० लाख मत सूर्यमा गयो । सूर्यमा मत दिनेको हालत सेयर बजार खस्केपछि पछुताउनुपर्ने भयो कि भएन ? यसतर्फ वामपन्थी अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषक खोई ?
ओरालो लागेको सेयर बजारलाई साविकको ठाउँमा फर्काउने उपाय अर्थमन्त्रीसँग हुनुपर्छ । २ करोड डुबेपछि सेयर कारोबार गर्दै आएका एक जनाले पासो लगाएर आत्महत्या गरे । के नेकपाको सरकार बन्दै गर्दा सेयर बजार ओलारो लाग्नुपर्ने हुन्छ ? अहिले जमिनको कारोबार ठप्प छ । १२ सय पुगेको सेयर ५ सयमा झर्दा समेत अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीका बारेमा सरकार चुप बस्नुहुँदैन । अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्र जारी गरेर उम्किएका छन् ।
दैनिक १ अर्बको सेयर कारोबार हुँदा सरकारलाई १५ करोड राजस्व आएकै थियो । अहिले त्यो ठप्प छ । जग्गा कारोबार छैन । देशका ४–५ सय लेखनदासहरू हात बाँधेर बस्नुपर्ने भएको छ । भूमाफियाहरूले बैङ्कमार्फत् लगानी गर्थे । पुँजी बजार ध्वस्त भएपछिको अवस्थामा पैसावालाहरूले बैङ्कमा पैसा राखेका छैनन् । लगानी पनि गरेका छैनन् । केही बैङ्कहरू घरभित्रको पैसा निकाल्न तम्सिएकै थिए । भन्सार ठप्प छ, कर असुलीका नाममा जताततै त्रास खडा गरेर ओरालो लागेको सेयर बजार कसरी उठ्छ ? अहिले बैङ्कहरूले व्याजदर बढाबढ गरेर लुकेको रकम बैङ्कमा तान्न खोजेका छन् तर बीचमा ब्रोकर बनेको बैङ्कर सङ्घ नै विवादमा प¥यो । आपसी प्रतिस्पर्धामा बैङ्कहरूले खुट्टा तातातान गरे । सरकारले सेयर ब्रोकरहरूबाट उब्जाइएको यो आतङ्कको मिहिन अध्ययन गरेकै छैन । आर्थिक रूपमा देशको चहल–पहल गराउने व्यापार व्यवसाय र विकास कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु जरुरी छ । प्रधानमन्त्री ओलीले विकासे सपना देखेका छन् । उनको भनाइ र गराइमा टेवा दिने अर्थ मन्त्रालयमा तथ्याङ्कशास्त्रीलाई अर्थमन्त्री बनाउँदाको फल हो यो । उच्च तहका व्यक्तिको बोलीले पनि सेयर कारोबारमा प्रभाव पार्छ । डा. बाबुराम भट्टराईले धितोपत्र बोर्डलाई जुवाको खाल भने, भारतसँग लगानी सुरक्षा सम्झौता बिप्पा गर्दा जुवा खेलेको बताए । उनका यी दुई बोली समयमा अनिष्ट ठहरिए । बिप्पा कार्यान्वयन भएन । उनीसँगै भारत भ्रमणमा रहेका उपप्रम एवं परराष्ट्रमन्त्रीले विमति जनाए । अहिलेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले लगानीकर्ताहरूको भेटमा पुँजी बजारको विकासका लागि नीतिगत र संस्थागत विकासतर्फ जोड दिन मन्त्रालय तयार रहेको बताउँदा लागनीकर्ता हौसिएको चर्चा चल्यो । मन्त्रीले बोल्दा सेयर बजार ओरालो लाग्छ भने किन बोनुप¥यो ?
त्यसो त पछिल्लो एक महिनामा वाणिज्य बैङ्कहरूले रू. ३२ अर्ब निक्षेप बटुलेका छन् । यसमा १६ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ । लगानी नियन्त्रण गरेकै कारण अहिले घरजग्गा कारोबार ठप्प भएको हो । राष्ट्रिय समस्या धेरै छन् । धेरै समस्या एकै चरणमा सफल र समाधान हुँदैनन् । सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्ने दलालहरूको प्रतिस्पर्धा छ । यस्तो बेलामा भन्सार शून्य भयो, आयात घट्यो भने सरकारको लक्ष्य पूरा हुँदैन । यस्तो बेलामा एमाले र माओवादी बनेका वामपन्थी अर्थशास्त्रीहरूले बेल्नुपर्दैन ?